कागको क्याटवाक् हेर्दाहेर्दै भाइरल बन्यो ! (रोचक भिडियो) - नेपाल कुरा
कागको क्याटवाक् हेर्दाहेर्दै भाइरल बन्यो ! (रोचक भिडियो)
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०७७, बिहीबार , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । तपाईहरुले फेसन सोमा मोडेलहरुले क्याट्वाक् गरेको त धेरैचोटी देख्नु भएको होला । तर तपाईले एउटा कागले पनि क्याटवाक् गरेको भिडियो कहिले सुन्नु र हेर्नु भएको छ ? त्यो पनि राम्रो क्याटवाक्मा । यस्तैमा सोशल मिडियामा आजभोली एउटा काग भाइरल भइरहेको छ ।
कागलाई वास्तबमा मनपराउने कमै हुन्छन् । तर यो कागलाई चाहिँ धेरैले मन पराएका छन् । किनभने यसले अनौठो तरिकाले क्याटवाक् गरेर सबैलाई रमाइलो प्रदान गरेको छ । यसको लचिलो क्याटवाक्ले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सफल भएको छ ।
भिडियोमा एउटा काग एक्कासी कौसीको बार्दलीमा आउँछ र क्याटवाक गर्दै त्यसको पर्खालबाट हिँड्छ । कागले गरेको क्याटवाक् कुनै साधारण किसिमको नभई एवान् भएको विज्ञहरु बताउने गर्दछन् । अहिले यस कागको क्याटवाक् सामाजिक संजालमा एकपछि अर्को गर्दै भाइरल भइरहेको छ ।
लामो समयपछि कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोबर मस्ती गर्दै, भिडियो भयो भाइरल
महिला गुप्तांगको पाँच रोचक तथ्य !